မျက်နှာအဆီပြန်သူ တို့အတွက် အုန်းရည် ! – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ရွှေကူမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများပုံပါ ဗီနိုင်းဆိုင်း ဘုတ်တင်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အထက်မင်းလှမြို့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ မင်းလှမြို့အတွင်း အောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူ
ကြိုကျထိုမွို့နယျ သိမျဇရပျမွို့ ၀ငျးကံကြေးရှာသို့ ကိုဗဈ-19 ဥပဒနှေငျ့အညီ တဈအိမျတကျဆငျး (Door to Door)စနဈဖွငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးစတငျ
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ မူဆယ်ဆယ်လန့်ဈေး၌ Face Mask များပေးဝေ လှူဒါန်း
ကျောက်မဲမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ Door to Door ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
၂ကြိမ်မြောက် UEFA Super Cup ချန်ပီယံဆုဖလား ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့သည့် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်း
မက်ဆီနှင့်ရော်နယ်ဒိုမပါသည့် UEFA၏ ဆန်ကာတင်အကောင်းဆုံးကစားသမား ၃ ဦးစာရင်းထွက်
အစိုးရဖြစ်လျှင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြန်လည် ကောင်းမွန်ရေး လုပ်ဆောင်မည်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌပြော
ပါတီဗဟိုအလုပ်အမူဆောင် ကရင်ပြည်နယ်တာဝန်ခံ ဦးသူရိန်ဇော် ကော့ဂရိတ်မြို့နယ် တောင်ဘက်ခြမ်း မိဂလုံ ကျေးရွာတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင် ဗီနိုင်း ဆိုင်းဘုတ်များ ဆိုက်ထူ
ဇမ်မူသီရိမွို့နယျ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးမြား အလြှငျလိုကြေးရှာနေ ပွညျသူမြားနှငျ့ သှားရောကျတှဆေုံ့
ရွှေကူ စက်တင်ဘာ ၂၅ ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ် တုံးပုံကျေးရွာတွင် မြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ပုံပါဗွီနိုင်းဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲကို စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက …
မကွေး စက်တင်ဘာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အထက်မင်းလှမြို့၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ မင်းလှမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်များသို့ ပါတီအောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်များအား ယမန်နေ့ နံနက် ၈ နာရီ၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် …
ကြိုကျထို၊ စကျတငျဘာ ၂၄ ကြိုကျထိုမွို့နယျ၊သိမျဇရပျမွို့အတှငျးရှိ ၀ငျးကံကြေးရှာသို့ ယနမေ့နကျ ၈ နာရီခြိနျမှ စတငျ၍ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီမှ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးမွငျ့ဆှေ၊ ပွညျနယျလှတျတျော အမှတျ(၁) …
မူဆယ် စက်တင်ဘာ မူဆယ်မြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်လောင်းနှင့် ခရိုင်/မြို့နယ် ကော်မတီဝင်များ ဆယ်လန့်ဈေးသို့ ပြည်သူ များအတွက် Face Mask များဝေပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်မဲ စက်တင်ဘာ ကျောက်မဲမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ မြို့နယ်ကော်မတီများ၊ ပါတီဝန်းရံလူငယ် များသည် ယမန်နေ့က အမှတ် (၂) ရပ်ကွက် နယ်မြေ (၁၃၊ …
မျက်နှာအဆီပြန်သူ တို့အတွက် အုန်းရည် !
September 6, 2017 USDP 2016
မျက်နှာပြင်မှ အဆီပြန်၊ ချွေးထွက်လို့ စိတ်ပျက်နေသူတို့ အတွက်ပါ။ ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ ဝင်းလက်တောက်ပတဲ့ မျက်နှာပြင် အလှတွေပျက်နေတယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား။ မျက်နှာပြင်အဆီပြန်တာကို ဇျေးကြီးတဲ့ အလှပြင် ပစ္စည်းတွေကို တကူတက ရှာဖွေဝယ်ယူနေစရာမလိုပဲ လတ်ဆတ်တဲ့ အုန်းရည်ကို အသုံးပြု ဖြေရှင်းနိုင်ပါ တယ်။
အသားအရေ ထိန်းသိမ်းဆောင့်ရှောက်ခြင်း အတွက် အုန်းရည်ကို အသုံးပြုလျှင် မျက်နှာပြင်သန့်စင်ပေးခြင်းနှင့် တိုနာအဖြစ် လည်းကောင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု နှစ်မျိုးကို တချိန်တည်းမှာ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာ ပြင်ပေါ်ရှိ အဆီများကို ဖယ်ရှားကာ သဘာဝအတိုင်း အသားအရေကို လင်းလက်တောက်ပစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံနှင့် မျက်နှာပေါ်ရှိ အစွန်းအထင်း တို့ကိုပါ သန့်စင်ပေးသည်။ အရွယ်မရောက်ခင် အိုမင်းရင့် ရော်ခြင်းကိုလဲ တားမြစ်ပေးနိုင်သည်။
ဂွမ်းစကို လတ်ဆတ်တဲ့ အုန်းရည်မှာ နှစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ အေးမြတဲ့ အရသာကို လိုချင်ရင် ဂွမ်းစကို အုန်းရည်ထဲ နှစ်အပြီးမှာ ရေခဲတုံးကလေးများပေါ်တွင် ခေတ္တ တို့သုတ်ပြီးမှ မျက်နှာကို သုတ်လိမ်းပါ။ ပြီးရင် မျက်နှာကို လေသလပ်၍ အခြောက်ခံပါ။ ငွေကုန်ကြေးကျ မများပဲ အလွယ်တကူ မျက်နှာကို အလှဆင်နိုင်ကြပါစေ။
Credit: Winn Hlaing Oo
← 13MP+5MP ကျောဘက်ကင်မရာနှစ်ခုပါဝင်တဲ့ Samsung Galaxy J7+
သင်္ဘောသီးမှည့်၏ ကောင်းကျိုးများ →
ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ သက်သာစေဖို့အတွက် နည်းလမ်း (၇) ချက်
February 24, 2017 USDP 2016 Comments Off on ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ သက်သာစေဖို့အတွက် နည်းလမ်း (၇) ချက်
မကွေးတိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် နှုတ်ခမ်းကွဲအာခေါင်ကွဲ အခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသပေးနေ
November 8, 2017 USDP 2016 Comments Off on မကွေးတိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် နှုတ်ခမ်းကွဲအာခေါင်ကွဲ အခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသပေးနေ
အချိန်တိုအတွင်း ၀ိတ်အမြန်ချခြင်းက ကျန်းမာရေးအပေါ် ထိခိုက်မှုရှိ
February 8, 2017 USDP 2016 Comments Off on အချိန်တိုအတွင်း ၀ိတ်အမြန်ချခြင်းက ကျန်းမာရေးအပေါ် ထိခိုက်မှုရှိ
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ၂-၁ ဆီဗီလာ (မိနစ် ၉၀ ရလဒ် ၁-၁၊ အချိန်ပိုတွင် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နိုင်) ဆီဗီလာက ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို ရှုံးခဲ့ပေမယ့် ကစားပုံ မညံ့ခဲ့ပါဘူး။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို …
UEFA တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုအတွက် နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၃ ဦးကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး ဒီစာရင်းမှာ မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုတို့ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ၁၀ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်သူတို့ ၂ …
မာစတာချန်ပီယံဆုကို ဂျိုကိုဗစ် စံချိန်တင်ရရှိ
ကမ္ဘာ့အဆင့်(၁) ဆားဘီးယားတင်းနစ်သမား နိုဗက်ဂျိုကိုဗစ်ဟာ အီတလီအိုးပင်းပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရ ပြီးနောက် ကစားသမားဘဝ (၃၆)ခုမြောက် မာစတာချန်ပီယံဆုကို ရခဲ့ပါတယ်။ တနင်္လာညက ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးချင်း ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဂျိုကိုဗစ်နဲ့ …
အီတလီအိုးပင်းပြိုင်ပွဲတွင် ရိုမေးနီးယားတင်းနစ်မယ် ဆိုင်မွန်ဟေးလက် ဗိုလ်စွဲ
အီတလီ အိုးပင်းတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ရိုမေးနီးယားတင်းနစ်မယ် ဆိုင်မွန်ဟေးလက်က ချက်တင်းနစ်မယ် ပလစ်ကိုဗာကို အနိုင်ယူပြီး ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်က ရောမမြို့မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်လုပွဲမှာ …
ကစားသမားဘဝ ပထမဆုံးမေဂျာဆုဖလားကို ဒီချမ်ဘီယူ ရရှိ
အမေရိကန်အိုးပင်းဂေါက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲကို နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ မာမာရိုးနက်ခ်မြို့က Winged Foot ဂေါကလပ်မှာ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်ကနေ ၂၀ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့ရာမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဘရိုင်ဆန်ဒီချမ်ဘူက ၄ …